Children of A Lesser God ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
2018မှာထွက်ရှိထားတဲ့ သဘာဝလွန်ပုံစံလေးနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ စုံထောက် seriesလေးပါ.
နာမည်ကြီးကားတွေကိုထုတ်လွှင့်နေတဲ့ OCN နှင့် Netflixတို့က Distributorလုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း၁၆ပိုင်းပါဝင်ထားပါတယ်
Castsတွေကတော့ Kang Ji Hwan,Kim Ok Bin,Shim Hee Sub,Lee Elliya တို့ကပါဝင်ထားကြပါတယ်
Rating မှာဆိုရင်လည်း IMDb 7.6/10, My drama list8.3/10ထိရရှိထားပါတယ်
ချွန်ဂျေးအင်း(Kang Ji Hwan)ကစမတ်ကျကျနေတတ်ပြီးအမှုစုံစမ်းရာမှာလည်း စာအုပ်ကြီးအတိုင်းအကြောင်းအရာ အခြေအနေတွေမူတည်ပြီးအမှုလိုက်တဲ့စုံထောက်ကြီးပေါ့……
ကင်ဒန်(Kim Ok Bin)ကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းကနေသဘာဝလွန်စွမ်းအားကိုရရှိထားတဲ့စုံထောက်မလေးပေါ့
ငယ်ငယ်လေးထဲက သေသူတွေရဲ့ ဝိဥာဉ်,သရဲတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူလေးပေါ့
ကင်ဒန်ရဲ့စွမ်းအားတွေကို စုံထောက်ကြီးကယုံကြည်ပေးမှာလား? ???????
Translated by Thandar,Ei Ei,Angela,Hlaing Min Tun & Thae Nu
Starring: Han Seo-Jin, Jang Gwang, Jo Min-ki, Kang Ji-hwan, Kim Ok-vin, Lee Elijah, Sim Hee-seop,